Words With Friends2– Free Word Games & Puzzles 12.406 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 12.406 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
ဂိမ္းမ်ား စကားလံုး Words With Friends2– Free Word Games & Puzzles
Words With Friends2– Free Word Games & Puzzles ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ကမ္ဘာ့နာမည်ကျော်မိုဘိုင်းစကားလုံးဂိမ်းထဲကတစ်ခုကြှနျုပျတို့အားလုံးအတွက်စကားလုံးကစားသမားအဘို့တည်အားလုံးဂိမ်းအသစ်သည် Modes နှင့်အတူအစဉ်အဆက်ထက်ပိုကောင်းနှင့်စမတ်သည်။ လှလှပပနှင့်ထောက်လှမ်းရေးဒီဇိုင်း, သူငယ်ချင်းများကို2နှင့်အတူစကားစကားလုံးဂိမ်းများ, စကားလုံးပဟေဠိများနှင့်အစဉ်အဆက်အရင်ကထက်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်သင့်ဦးနှောက်ကိုစိန်ခေါ်ဖို့ပိုအကျင့်တို့နှင့် teeming ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဝေါဟာရ Expand နှင့်သင်ဤချစ်ရာသခင်သည်အခမဲ့စကားလုံးဂိမ်းထဲမှာအမြင့်ဆုံးအမှတ်ပေးစကားလုံးရှာဖွေအဖြစ်သင့်စာလုံးပေါင်းကျွမ်းကျင်မှုကိုချွတ်ပြပါ။
သူငယ်ချင်းများ2နှင့်အတူစကားလုံးများကိုစကားလုံးပဟေဠိဂိမ်းအတွက်အဆုံးစွန်ပါ! ဒါဟာကစားရန်အခမဲ့, ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်ရန်ခက်ခဲပါ!
တခါတရံမှာထိတွေ့တည်းခိုပြီးပြည့်စုံသောစကားလုံးကစားသကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။ အများဆုံးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အခမဲ့စကားလုံးဂိမ်းတွေထဲက Download များနှင့်သူငယ်ချင်းများ2ယနေ့နှင့်အတူစကား play! အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဝင်းမေ။ ™
►ပူးပေါင်းအသစ်မြန်ဆန်အဖွဲ့ mode မှာယှဉ်ပြိုင်ကစားရမှာတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အထိ5ကစားသမားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အပေါ် Play နှင့်ပထမဦးဆုံးအများဆုံးရမှတ်ဂိုးသွင်းနှင့်အနိုင်ရမယ့်ပွဲစဉ်များတွင်ချွတ်ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ လျင်မြန်စွာဘုတ်အဖွဲ့တွင်ရှာပါ။
ACCESS 50000 စကားလုံးအသစ်
အဆိုပါအဘိဓါန်မှ►ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးမားဆုံး update ကိုအစဉ်အဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ pop ယဉ်ကျေးမှုအားဖြင့်မှုတ်သွင်း 50000 အသစ်သောစကားတို့ပါဝင်သည်။
သူငယ်ချင်းများ2နဲ့အတူစကားများအခမဲ့စကားလုံးဂိမ်းဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သင်ယခင်ကဆိုမိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိသူငယ်ချင်းများစကားလုံးဂိမ်းနှင့်အတူ Pro ကိုသို့မဟုတ်မူရင်းစကားများမ Third-party ကြော်ငြာတွေသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူဖြစ်စေစကားများဝယ်ယူလျှင်သင်ရွေ့လျားအကြားတတိယပါတီကြော်ငြာများမပါဘဲကစားနိုင်ပါတယ်။ Facebook မှာဒါမှမဟုတ်သင်ရွေ့လျားအကြားတတိယပါတီကြော်ငြာများမပါဘဲကစားရန်ဆက်လက်ယခင်ဝယ်ယူစေရန်အသုံးပြုသောအီးမေးလ်အကောင့်နဲ့ log ရန်သေချာစေပါ။
မိုဘိုင်းပေါ်တွင်အများဆုံးပျော်စရာ, လူမှုရေးစကားလုံးပဟေဠိ၏တဦးတည်း Play! သူငယ်ချင်းများ2ယနေ့နှင့်အတူစကား Download!
Words With Friends2– Free Word Games & Puzzles အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Words With Friends2– Free Word Games & Puzzles အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Words With Friends2– Free Word Games & Puzzles အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Words With Friends2– Free Word Games & Puzzles အား အခ်က္ျပပါ
mr-robot-games စတိုး 5.16k 8.24M
Words With Friends2– Free Word Games & Puzzles ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Words With Friends2– Free Word Games & Puzzles အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 12.406
App Name: Words With Friends2– Free Word Games & Puzzles
File Size: 81.05MB
Release date: 2019-06-24 22:43:18
Words With Friends2– Free Word Games & Puzzles APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ